Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Genital Psoriasis: Nsonaazụ nke ọmụmụ ọhụrụ
Ọmụmụ ihe ahụ gosiri na ọnụ Otezla 30 mg ugboro abụọ kwa ụbọchị nwetara mmụba bara uru nke ụlọ ọgwụ na nke ọnụ ọgụgụ dị ukwuu, ma e jiri ya tụnyere placebo, na njedebe bụ isi nke nzaghachi nzaghachi Global Assessment of Genitalia (sPGA-G) gbanwetụrụ (akọwapụtara dị ka akara sPGA-G). nke doro anya (0) ma ọ bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nke doro anya (1) yana opekata mpe mbelata 2 site na ntọala) na izu 16.
Tụkwasị na nke ahụ, a na-ezutekwa ngwụcha ngwụcha abụọ niile nwere ọganihu bara uru na nke dị ịrịba ama na nzaghachi Genital Psoriasis Itch Numerical Rating Scale (GPI-NRS) (akọwapụtara dị ka opekata mpe mbelata 4 site na ntọala na GPI-NRS ihe akara n'ime Genital Psoriasis Symptoms. maka isiokwu ndị nwere akara mmalite nke ≥ 4); emetụta akụkụ ahụ (BSA) mgbanwe site na ntọala; Dermatology Life Quality Index (DLQI) gbanwere site na ntọala; na nzaghachi nyocha zuru ụwa ọnụ nke dibịa (sPGA) (akọwapụtara dị ka akara sPGA nke doro anya (0) ma ọ bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nke doro anya (1) ma ọ dịkarịa ala mbelata 2 site na ntọala) na izu 16 na Otezla vesos placebo.
Ụdị na ọnụego nke ihe ọjọọ ndị a hụrụ na ikpe a kwekọrọ na profaịlụ nchekwa nke Otezla mara. Ihe ọjọọ a na-akọkarị bụ nke mere na opekata mpe 5% nke ndị ọrịa na otu ọgwụgwọ ọ bụla bụ afọ ọsịsa, isi ọwụwa, ọgbụgbọ na nasopharyngitis.
Ndị ọrịa na-emecha akụkụ abụọ nke ikpe ahụ na-aga n'ihu ma ọ bụ gbanwee na Otezla n'oge mgbatị mgbatị nke ọmụmụ ahụ ma a ga-agwọ ya site na izu 32. Ọmụmụ ihe na-aga n'ihu ma na-eme atụmatụ imecha na ọkara mbụ nke 2022.
A ga-edobe nsonaazụ zuru ezu site na izu iri na isii nke akụkụ abụọ kpuru ìsì nke ọmụmụ ihe maka ngosi na ogbako ahụike na-abịa.
Na US, a kwadoro Otezla maka ọgwụgwọ nke ndị okenye nwere psoriasis dị oke oke ma dị njọ bụ ndị na-achọ maka phototherapy ma ọ bụ usoro ọgwụgwọ usoro, ndị okenye nwere ọrịa ogbu na nkwonkwo na-arụsi ọrụ ike na ndị okenye nwere ọnya ọnụ nke metụtara Behçet's Disease. Ebe ọ bụ na nkwado FDA mbụ ya na 2014, e debere Otezla ka ọ bụrụ ndị ọrịa 650,000 n'ụwa nile nwere psoriasis plaque na-agafeghị oke na nke siri ike, ọrịa ogbu na nkwonkwo psoriatic na-arụ ọrụ ma ọ bụ Ọrịa Behçet.